ShweMinThar: Contest, Competition
ခုတစ်လောရင်ဖွင့်သံတွေကြားနေရတယ်...ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သတ်လို့ပေါ့.သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ၊ဓာတ်ပုံဆရာလောက၊ မော်ဒလ်လောက၊ ဆရာဝန်လောက ပေါင်းစုံမှာပါ။ ဆုရတဲ့သူတွေကလည်း ကြွားကြသလို၊ ပြုတ်တဲ့သူတွေကလည်း အော်ဟစ်နေကြနဲ့ပေါ့။
၃။ သဘောတူညီထားသော အခွင့်အရေးများကို ဆုရပါက ထိုအတိုင်းရမည်ဟုမျှော်လင့်ထားသူများ
၄။ တစ်ချို့ကမွေးရာပါ ပြိုင်နေရတာကို သဘောကျတာ
၄။ မိဘက ငယ်ငယ်က သူတို့မပြိုင်ခဲ့ရတဲ့ပွဲကို သားသမီးလက်ထက်မှာ အတိုးချပြိုင်ကြတာ
၅။ ရိုလာကိုစတာစီးသလို အတက်အကျ emotion ကို ကစားခံရတာကိုက အရသာရှိတယ်လို့ ယူကြသူများနဲ့
ပြိုင်ပွဲပြိုင်ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးက အနိုင်ရချင်လို့ဘဲပြိုင်ကြပါတယ်။ ကံမကောင်းအကြောင်းမလှလို့အဖြုတ်ခံရလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်ညံ့လို့ ပြုတ်သွားလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် အရှုံးနဲ့အနိုင်(၂)ခုထဲက (၁)ခုတော့ ရမယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲမှာထားဖို့လိုပါတယ်။
ပွဲတစ်ခုအဆင့်အတန်းရှိမရှိ ဒိုင်တွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးမကြားဖူးတဲ့သူတွေကို အရုပ်လိုထည့်ထားတာတွေရှိပါတယ်။ Company တစ်ခုက ကျင်းပတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပြိုင်ပွဲအဖြေဟာသူ့ပါးစပ်ထဲမှာဘဲရှိပါတယ်။ အဲဒီ Company ဟာ အနုပညာနဲ့ပတ်သတ်လို့မသိနားမလည်တာရှိလို့ Organizer လို့ခေါ်တဲ့ Agency တစ်ခုကိုသာအပ်မိပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် အဲဒီ ဦးစီးကျင်းပတဲ့ Agency အဖွဲ့အစည်းကလူတွေဘဲ ရတတ်ပါတယ်။ ဒိုင်လူကြီးအဖြစ်ဖိတ်ကြားခံရပြီဆိုရင် မိမိပေးတဲ့အမှတ်ကို တကယ်ထည့်တွက်မတွက်၊ ဗန်းပြအနေနဲ့လာထိုင်ခိုင်းလားဆိုတာကို အဲဒီလူကြီးမင်းကလည်း ချိန်ဆတတ်ရပါမယ်၊ ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ရပ်တည်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်များကတော့ ဒီအချက်ကိုချိန်ဆချင့်ချိန်တတ်ကြပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် Fair ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အမှတ်ပေးဒိုင်များဟာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ညှိနိုင်းတိုင်ပင်လို့မရမယ့်အကွာအဝေး(သို့)မမြင်နိုင်အောင် အကာနဲ့ကာထားပေးရပါမယ်။ ကွန်ပျူတာနဲ့ပရိသတ်အကုန်မြင်နိုင်တဲ့ LED monitor များနဲ့ သူတို့အမှတ်ဘယ်လောက်စီပေးတယ်ဆိုတာ မြင်သာရပါမယ်။ ဥပမာ ဒိုင်တစ်ယောက်သည် သြဇာတိက္ကမ ကြီးပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်သူဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့လူ ပွဲထဲမှာပါလာပြီဆိုရင်၊ ကျန်တဲ့ ဒိုင်ပေါက်စများက သူ့အလိုကိုဘဲလိုက်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတတ်ကြပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မှာပြတ်သားပြီး၊ မိမိထင်မြင်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ခုခံကာကွယ်ရဲတဲ့ သူမျိုးများကိုသာ ဒိုင်သူကြီးအဖြစ်တာဝန်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဆုရဖူးသူနှင့် ဆုမရဖူးသူများခွဲပေးသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့မရေတွက်နိုင်အောင် ဆုတွေလည်းရ၊ အတွေ့အကြုံလည်းများပြီး အစာအိမ်သုံးခုရှိတဲ့မြင်းက ဘယ်လောက်စားစားဗိုက်မ၀သလို ပွဲတွေမှာဆုတွေသိမ်းကြုံးယူလေ့ရှိပါတယ်။ ဆုအများကြီးရှိပြီးသားသူဟာ ပွဲအတွေ့အကြုံလည်းများသလို၊ ပိုင်ရာဆိုင်ရာတွေနဲ့လည်းတော်တော်လေးရင်းနှီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် မျက်နှာကြီးရာဟင်းဖတ်ပါရတာ ပွဲတွေရဲ့ထုံးစံပါဘဲ။
မြန်မာပြည်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ Questions & Answers ပါတယ်ဆိုရင် ဘာမှလည်းစာမကျက်ပါနဲ့ သိအောင်လည်းမကြိုးစားပါနဲ့၊ မလိုပါဘူး။ ဘယ်လောက်စာတော်တော် ရုပ်မလှရင်မပေးပါဘူး. ဒါနဲ့ဆန်ကျင်ဘက်ပဲ... ရုပ်သာရှိမယ်ဆိုရင်၊ စာမတတ်လည်း Brand Ambassador ဖြစ်ခွင့်ရှိကြပါတယ်။ တစ်ခါက ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဆေးရည်တစ်ခုပြိုင်ပွဲမှာ...ဒီဆေးရည်ကို ဘာလို့ကြိုက်တာလဲမေးတော့ " ချေးချွတ်လို့ရလို့ပါတဲ့" ..အဲဒီလူက ပထမဆု ရသွားပါတယ်။ Miss ရွေးပွဲတစ်ခုမှာ English လို တူရိယာတစ်ခုတီးခတ်တတ်လားမေးတာကို အချက်အပြုတ်အရမ်းဝါသနာပါလို့ မုန့်ဟင်းခါးတစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်စားဖြစ်တယ်လို့ဖြေတဲ့သူတွေလည်း ဆုရတတ်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေတွေများလာပြီး ကပ်ဘေးဆိုက်တာကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကို အင် နဲ့ အယ် ကလွဲပြီး ဘာမှထွက်မလာဘဲနဲ့ First runner up ရသွားသူများလည်း ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် ပြိုင်ပွဲဝင်အသစ်လေးများအပင်ပန်းခံပြီး စာမကျက်ကြပါနဲ့လို့၊ အဲဒီအစား Plastic surgery လုပ်ပြီး Gym များများကစားနိုင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
လုပ်ပွဲများဖြစ်လို့ကတော့ Rehearsal မှန်မှန်လာ၊ အပင်ပန်းခံကြိုးစားတာတွေ ဘယ်လောက်လုပ်လုပ်၊ သူ့လူနဲ့သူ ရှိပြီးသားပါ။
သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ ဒီဇိုင်နာ၊ မိတ်ကပ်ပညာရှင်ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ ၀ှက်ဖဲတွေအများကြီးပါ။ ပိုင်တဲ့ဆိုင်တဲ့သူဆိုရင် Make-up Artist ကိုယ်တိုင် အရင်လာပါဆိုပြီးခေါ်လိမ်းပေးပါတယ်။ အကောင်းစားသုံးပါတယ်။..ထုံထုံ အ အ နှာခေါင်းသာမပါရင် ဟိုဟာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူများကတော့ အချိန်ကုန်ခံ၊ ဇက်ညောင်းခံထိုင်စောင့်ပြီး အကျော်ခံရတာတွေအများကြီးပါဘဲ။ စစ်မှန်ပြီး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ Contest တွေက စပွန်ဆာကို ခေါင်းစ ခြေဆုံး Unisex ပေးပါတယ်။ ဘယ်ပြိုင်ပွဲဝင်သည် ဘယ် Professional နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတာ မဲနှိုက်မှ စစ်မှန်တယ်ခေါ်ပါတယ်။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ All black , All White, Jean, Office style လေးများဝတ်ခဲ့ပါဆိုရင်တော့ သေချာပါပြီ..အဆင့်မရှိတဲ့ပွဲပါဘဲ။
ဆုကြေငြာခါနီးမှာ Announcer နဲ့ ဒိုင်တွေခဏပျောက်သွားတယ်။ ပြိုင်ပွဲကျင်းပတဲ့ ဟိုတယ်ကြီးရဲ့အထပ်တစ်ထပ်ကိုတက်သွားကြပြီး ခေါင်းချင်းဆိုင်ဆွေးနွေးကြတယ်တဲ့။ ဒီဇင်ဘာ(၂၅)ရက်တိုင်းကျင်းပတဲ့ ဒီပွဲလေးမှာ မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ဆုမရခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုယ်စား ဖော်ပြရခြင်းပါ။
သူတို့တွေပေးလိုတဲ့ လူကတစ်ယောက်၊ သူလိုမျိုးအရည်အချင်းမျိုးတူတဲ့ ပြိုင်ဖက်တစ်ယောက်ပါလာပြီဆိုရင် ဆန်ခါတင်အဆင့်မှာကတည်းက ဖြုတ်ချလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ့်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်တဲ့ဒိုင်တွေလာမယ်ဆိုရင် ဒီအကွက်တွေသုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဆိုလိုတာက တခြား ဂွမ်းတဲ့သူတွေနဲ့ တကယ့်လူရှေ့စင်ပေါ်မှာ အနုတောလူချော Strategy ကိုသုံးခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ ပိုသနားစရာကောင်းတာက ခုနက ဓားစာခံဖြစ်သွားတဲ့ ဂွမ်းစိန်လေးတွေခမျာပိုက်ဆံတွေကုန်၊ အချိန်တွေကုန်သလို ဆန်ခါတင်မှာ အဖြုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အရည်အချင်းရှိသူများရဲ့ ကဲ့ရဲ့စကားတွေ၊ တကယ့်တကယ်သူတို့ဆုမရတဲ့အခါကျရင် အဟားခံလိုက်ရတဲ့အဖြစ်လေးတွေပါ။
ဈေးကြီးကြီး ၀တ်စုံကောင်းကောင်းကို နာမည်ကြီးဒီဇိုင်နာနဲ့ချုပ်၊ ငွေကိုရေလိုသုံးနိုင်ရင်လည်းဆုရတတ်ကြပါတယ်။ ၀တ်စုံမှ မဟုတ်ပါဘူး အရာရာငွေကို ရေလိုသုံးနိုင်လေ ကောင်းလေပေါ့။ ဒိုင်များနဲ့ဒီဇိုင်နာများဟာလည်း အလုပ်သဘောရဆက်ဆံနေရတာဖြစ်လို့ ဘယ်သူ့လက်ရာမှန်း ဒိုင်တွေသိကြပါတယ်။ သေချာတာတော့ အဲဒီဒိုင်ဟာ မဂ္ဂဇင်း(သို့မဟုတ်)ဓာတ်ပုံပိုင်းဆိုင်ရာကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် သူ့လုပ်ငန်းကို စပွန်ပေးနေကျ ဒီဇိုင်နာချုပ်ပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဆိုပေးရလေ့ရှိပါတယ်။
ဒိုင်ထဲမှာ နှာဗူးကျတာတွေ၊ ပရိတ်သတ်ကြီးကလည်း ရမ္မက်အသားပေးတွေဆိုရင်တော့သေချာပါတယ်၊ ကိုယ်ခန္ဓာကောက်ကြောင်းလှတဲ့သူတွေ၊ ဆုရပြီးနောက်ပိုင်းလည်းမိတ်ဖြစ်လို့ရတဲ့ သူတွေဆုရတတ်ပါတယ်။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတောင်မှ လက်ရေးလှရင် စာစစ်တဲ့ဆရာမတွေကို စိတ်ကြည်လင်စေတဲ့အတွက် ဂုဏ်ထူးထွက်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်အရည်အချင်းရှိရှိ 18+ ကိစ္စနဲ့ပတ်သတ်လို့ ဆွဲဆောင်အားနည်းမယ်၊ သားလိမ္မာ သမီးလိမ္မာလေးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ စလွယ်မပါဘဲ အိမ်ပြန်ရတတ်ပါတယ်။
ဒါတွေကြောင့် ကိုယ်အရည်အချင်းမရှိဘဲနဲ့ရလာတဲ့ဆုကြီးကို အိပ်ရာထဲဖက်အိပ်ရင်တောင် အိပ်မက်လှလှမမက်တတ်ကြပါဘူး။ Title ဆုရသော်လည်း မိမိကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ရလာတဲ့ဆုဆိုတာ အချိန်မရွေးတွေးလိုက်ရင်တောင် ပီတိဖြစ်စရာပါ။ ပွဲတွေလုပ်မယ်ဆိုလည်း ကော်ပီတွေမကူးကြပါနဲ့။ Make me supermodel ကို တုပြီး TV မှာ ကျင်းပနေတဲ့အစီအစဉ်တွေတွေ့ရင် စိတ်ပျက်စရာကြီးပါ။ ကိုယ့်လက်ထဲကို လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အရာတစ်ခုကို ကိုယ်ပိုင် Idea တစ်ခုနဲ့ထုဆစ်ကြပါလို့။ နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါဘဲ၊ ကိုယ်သည် ဒီပွဲတစ်ခုပြိ်ုင်တော့မယ်ဆိုရင် သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရေဖြစ်သည့်အတွက် သွန်ချင်သွန်၊ သောက်ချင်သောက်လက်ခံနိုင်မှသာ ပွဲတစ်ခုကိုပြိုင်စေချင်ပါတယ်။
by Kyaw Han Thar Myint
Posted by Alex Aung at 7:39 PM
ခရေပန်းဟာ အနွမ်းပန်း မဟုတ်ပါ
ငါးကျည်းခြောက် ငါးပိချက်၊ ကြက်သားသုပ်၊ ဘူးညွန့်ကြေ...
ဆက်ဆံရင်း ကွန်ဒုံး ကျွတ်သွားတာ.
ကျွန်တော် မန္တလေးကို ချစ်နေတုန်းပဲ
ကျန်းမာရေးအမေးအဖြေ ( အမှတ်စဉ် ၁၂၁)
AIDS ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေး လုပ်ငန်း ငွေကြေး အကြပ်တွေ့နေ
"ကမ္ဘာတွင် သူခိုးမရှိခဲ့သော နိုင်ငံ"
လူမဆန်သူများ၏ ပစ်မှတ်ဖြစ်လာသော ကလေးသူငယ်များ
HIV နှင့် ပတ်သက်၍ သုတေသန ရလဒ်သစ် တစ်ခုပေါ်ပေါက်
ကြက်သားကတ်တလိတ်၊ ၀က်လက်မျှစ်ချဉ်၊ ကြံမဆိုင် ဟင်းရည...
ကာမထကြွဆေး အတုများ သတိထားပါ
E4Y (အသက်မွေးမှုအကြို သင်တန်းကျောင်း)
မင်္ဂလာမဆောင်ခင် သိထားသင့်သမျှ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ
ကျန်းမာရေး ၅ နှစ် စီမံကိန်း ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ...
ဆင်းရဲသားဘဏ် သို့မဟုတ် လက်ခံလျှင် ဘဝကိုပါ ပစ်တင်ရေ...
ရန်ကုန် မုန့်ဟင်းခါး (အိုးဘဲဥ)
ထုံးစံ အတိုင်းတွေနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်